अत्यन्तै धनवान र भाग्यमानी हुन्छन् यी महिनामा जन्मने व्यक्ति, तपाईको कुन महिना ? – Jagaran Nepal
वर्षमा १२ महिना हुन्छ त्यसैअनुसार महिनै पिच्छे सबैको आ आफ्नै फरक फरक जन्म महिना रहेको हुन्छ । र त्यहीँ जन्म महिनाअनुसार फरक फरक विशेषता रहेको हुन्छ।
मानिसहरु तथा ज्योतिषहरु भन्ने गर्दछन यो महिना जन्मेको मानिस यस्तो भनेर तर कसैलाइ पनि थाहा हुदैन कि कुन महिना जन्मेको मानिस कस्तो भनेर त्यसैले आज हामी कुरा गदैछौ। कुन महिना जन्मदा कस्तो हुँदो रहेछ त ?
विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ। शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ। यी ग्रहहरुले तपाईको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन। तर यति कुरो याद गर्नुस तपाइ आफ्नो भाग्यमा भन्दा नि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस तपाइ सधै सफल हुनुहुनेछ। नयाँ पुस्ता बाट